Fri, May 29, 2020 at 9:07pm
भिडियो गेमको जापानी कम्पनी निन्टेन्डोले ‘सुपर मारीयो’ को एनिमेटेड फिल्म बनाउने घोषणा गरेको छ
बिहिवार, २५ माघ २०७४,	आहाखबर	1.08K
के तपाइले आफ्नो जीवनमा सुपर मारीयो भिडियो गेम खेल्नुभयो ? हरेक मान्छेले सुपर मारीयोको भिडियो गेम खेलेको अथवा यस्को बारेमा सुनेको त पक्कै होला । सुपर मारीयोका प्रसंसकहरुलाई खुसीको खबर ! सबैको लोकप्रिय सुपर मारीयोको अब फिल्म बन्ने भएको छ । भिडियो गेमको जापानी कम्पनी निन्टेन्डोले ‘सुपर मारीयो’ को एनिमेटेड फिल्म बनाउने घोषणा गरेको छ। इलुमिनेसन इन्टरटेन्मेन्ट, द अमेरिकन फिल्म र एनिमेसन स्टुडियोको सहकार्यमा निन्टेन्डोले उक्त फिल्म बनाउने भएको हो।
भिडियो गेम "मारीयो" सर्बप्रथम सन् १९८३ मा निर्माण भएको हो । यो गेमको अहिलेसम्म ५०० मिलियन कपी विक्री भइसकेको छ । फिल्मलाई निन्टेन्डो र इलुमिनेसनले लगानी गर्ने भएका छन्। युनिर्भसल पिक्चर्स फिल्म विक्रेताको रूपमा रहने छ।निन्टेन्डोले टुईटरमा ट्वीट गर्दै भनेको छ : ‘निन्टेन्डो र इलुमिनेसन मिलेर मारीयोको फिल्म निर्माण गर्दैछौं । यसमा सिगेरु मियामोटो र क्रिस मेलेटान्ड्री सह-निर्माण रहनेछ।’
मियामोटो भिडियो गेम मारीयोका निर्माता हुन् भने मेलेडान्ड्रीले इलुमिनेसन इन्टरटेन्मेन्ट र युनिर्भसल स्टुडियो निर्माण गरेका हुन्। इलुमिनेसनले ‘डिस्पेन्सेवल मि’, मिनियोन्स, द सेक्रट अफ पेटस् लगायतका एनिमेसन बनाएको छ। फिल्मको रिलिज मिति भने तय भएको छैन।